Nagarik Shukrabar - ड्राइभर भनेपछि केटी हुरुक्कै
सोमबार, ११ असार २०७५, ०८ : ०१
शुक्रबार, १८ फागुन २०७४, ०३ : १४ | भोला अधिकारी
चालक : अर्जुन दाहाल
कति भयो गाडी चलाउन थालेको ?
१५ वर्ष जति भयो ।
कति थियो उमेर ?
त्यस्तै २० वर्षको होला । सुरुमा ५ वर्ष त ट्रकको खलाँसी भँए । ट्रकमा काम गर्दै जाँदा गाडी कुदाउन सिकियो, बिस्तारै लामो दूरीकै गाडी चलाउन थाँले।
कुन रुटको गाडी चलाउनु भयो ?
५÷६ वर्ष काठमाडौं–कटारी नाइट गाडी चलाएँ । त्यसपछि काठमाडौं–खोटाङ–दिक्तेलतिर कुदाएँ ।
त्यो बाटो त निकै अप्ठ्यारो छ भन्छन् । हो ?
बाटो खतरनाक छ । मलाई पहिला यात्रु दिक्तेल पुर्याउँछ कि पुर्रयाउँदिन जस्तो लाग्थ्यो । यात्रुहरु भीरमा पुगेपछि चिच्याउँथे । मलाई पनि अलि अलि डर लाग्थ्यो । गन्तव्यमा पुर्याएपछि यात्रुले धन्याद दिन्थे ।
नाइट गाडी चलाउँदा रातिको समस्या के छ ?
३÷४ वर्ष अगाडि पतलैयाको जंगलमा धेरै लुटिने समस्या थियो । ७÷८ बजेपछि एक्लै परियो भने मुडा तेर्साएर लुट्थे । पुलिस प्रशासनले गाडी अघिपछि लागेर हिँड्थे । एउटा आएर थर्कायो भने थर्कमान हुनु पर्दथ्योे । अहिले यो कम हुँदै गएको छ ।
लामो दूरीमा गाडी चलाउने ड्राइभरको होटलवाालासँग सेट्रि हुन्छ, झुर खाना खुवाउने होटलमा लैजान्छन् भन्छन् नि ।
२ हजार २५ सय रुपैयाँ कमाउने भएपछि कसले लैजाँदैन र ? मैले नि लैजान्थे । हामीले कमिसन माग्ने होइन होटलवाला आफंैले दिन्छन् । स्टाफ खाना खान पनि पाइन्छ ।
होटलवालासँग पहिला नै सम्झौता हुन्छ ?
हुन्थ्यो । अहिले त आफ्नै प्राइभेट गाडी चलाउँछु ।
ड्राइभर जता गयो उतै गर्लफ्रेन्ड हुन्छन् रे हो ?
लामो दूरीको गाडी चलाउँदा धेरै नजिक हुन खोज्छन् । गाडीको ड्राइभर भनेपछि युवती कसरी बोलौं के गरी बोलौं भनेर बसेका हुन्छन् । बोलिदियो भने नजिक भइहाल्थे । तर अहिले पहिलाको जस्तो छैन । गाडी पुर्याएर फर्कन हतार हुन्छ गर्लफ्रेन्ड बनाउने फुर्सद कहाँ पाउनु ।
गाडीमा त चुरा घण्टी झुण्याउनु भएको रहेछ । किन ?
यो किचकन्ये, भूतले आँखा नछलोस् भनेर राखेको । पहिला–पहिलाका बाबु बाजेको भनाइअनुसार यसरी चुरा पोते झुण्ड्यायो भने भूत प्रेतले छुँदैन भन्ने मान्यता छ ।
भूत प्रेतमा विश्वास लाग्छ ?
लाग्छ । गाडी चलाइरहको बेला एक्कासि आयो भने सकिएन । त्यही भएर राखेको ।
डान्सबार सञ्चालक भन्छन् ‘अहिले गुण्डा गुण्डाजस्तै लाग्दैनन्’
कहिले ट्यापे आउँछन् । कहिले केटीको निहुँमा झगडा पर्छ । डान्सबार, दोहोरी साँझ भनेकै मादक पदार्थ सेवन गर्ने ठाउँ हो । रमाइलो गर्ने ठाउँ हो । खाइसके पछि कोही निहुँ खोज्छन् । कोही भने खाउन्जेल आँखा देख्दैनन्, खाइसकेपछि हिँड्ने बेलामा पैसा धेरे भो भनेर लफडा गर्न थाल्छन् । अब केटीसँगै बसेर खाए पनि उसैले पैसा तिर्नुपर्ने नियम हुन्छ । मैले यत्रो कहाँ खाएँ भनेर निहुँ खोज्छन् ।